စျေးအသက်သာဆုံးဥရောပခရီးဆုံးများအာလုံးပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel တူရကီ > စျေးအသက်သာဆုံးဥရောပခရီးဆုံးများအာလုံးပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်
စျေးအသက်သာဆုံးဥရောပခရီးဆုံးများအာလုံးပြီးတော့ဘယ်လိုရှိတယ် Get ရန်
အားဖြင့် ဒါဝိဒ်သည် Bernstein
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထား Travel တူရကီ
စျေးပေါဥရောပခရီးစဉ်ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဥရောပမှာခရီးသွားဧည့်ကြီးအထဲကနေအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ကော်ဖီဆိုင်များ သို့ လှပသောကမ်းခြေ. တူသောမြို့ကြီးများ၏ရလဒ်အဖြစ် ဗင်းနစ်, ရောမမြို့, နှင့် ခရီးသွားဧည့်ခရီးသွားများ၏ပဲရစ်သန်းပေါင်းများစွာသော to Europe every year. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးဥရောပခရီးစဉ်များစာရင်းကိုဖန်တီး. ဤစာရင်းတွင်ရထားရှိရရန်မည်သို့ပါဝင်သည်.
ပေါ်တိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအများစုကမှတ်သားဖွယ်ယင်း၏ဖြစ်ပါသည်’ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဝိုင်. ပင်လယ်ဒီအစျေးပေါတဲ့ဥရောပခရီးစဉ်တစ်ဥရောပ Mini-မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်. ပေါ်တိုယဉ်ကျေးမှုအဘို့ကြီးသောနှင့်အိမ်ပြင်ခစျြတဲ့သူကလူများအတွက်ထိုနည်းတူသည်ကောင်းလှ၏. အဆိုပါပြတိုက် နှင့်ဤစျေးပေါဥရောပခရီးလမ်းဆုံး၏ဗိသုကာဘုရားသခငျ့များမှာ. မုချ, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့နေရာ.
ပေါ်တိုရဲ့ရရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွန်များအတွက် စဝ် Bento ဖွစျပါတယျ ရထားဘူတာရုံကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဝင်.
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံတစ်ဦးကို တင်. ပြန်လည်မြို့ဖြစ်၏. တစ်နေ့လည်ခင်း siesta ခံစားကြည့်ပါ. ဂျူး, ခရစ်ယာန်နှင့်အစ္စလာမ့်ယဉ်ကျေးမှု. ခရီးရှေးဟောင်းဘုရား နှင့် ghettos တစ်နေ့တာအတွင်း. အစားအစာအရသာဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့် Tapas. ယင်းအပေါ်လက်တန်းဂစ်တာဂီတ လမ်းများဖမ်းယူနိုင်ခြင်း ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံများလျှော့ပေါ့လေထု. ဤသည်မှာစျေးပေါတဲ့ဥရောပခရီးစဉ်မြို့ဖြစ်ကောင်းကိုအကောင်းဆုံးရှိပါတယ် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း ဥရောပနှင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းအတွက်.
ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံရရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွန်နှင့်စျေးနှုန်းများအဘို့ Santa Justa မီးရထားဘူတာရုံကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဆိုက်သည်ကိုတွေ့မြင်.
ဗလင်စီယာရှိပါတယ်3အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကမ်းခြေ. ရလဒ်အနေဖြင့်, ဒါကြောင့်အကြီးအအပြင်မှာလှုပ်ရှားမှုများရှိပါတယ်. စျေးပေါ ဥရောပအမျိုးသားရေးပန်းခြံ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တောင်တက်အဘို့ကြီးသောရာအရပျ. , La Albufera အမျိုးသားဥယျာဉ်များကနီးကပ်စွာ, တောင်တက်အဘို့ကြီးစွာသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အစားကောင်းကြိုက်သူများလည်းယင်း၏အဘို့အဗလင်စီယာကိုချစ် လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ.
ဗလင်စီယာရဲ့ရရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွန်များအတွက် ဘူတာရုံ မွောကျ မီးရထားဘူတာရုံကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားက်ဘ်ဆိုက်ဝင်.
နောက်ထပ်အံ့သြစရာများနှင့်စျေးပေါမြို့အစ္စတန်ဘူလ်ဖြစ်ပါသည်. တူရကီမြို့တော်ဥရောပနှင့်အာရှအတူတကွဆောင်တတ်၏ကြောင့်,. ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကြွယ်ဝ, လှပသောဗိသုကာနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားရှုခင်းများ. အမိုးခုံးများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူပြေးတစ်ဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြာပင်လယ်၏ Skyline. ဤမြို့သည်အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူအာရုံအဘို့သည်ကြီး, မြို့တော်တစ်လျှောက်လုံးအနံ့နှင့်အသံ. ဒီမှာလူကြိုက်များအစားအစာဖြစ်နိုငျသော doner kebab နှင့်တူရကီချိုမြိန်ရယူထားသောဖြစ်ပါသည် လမ်းမများပေါ်တွင်ဝယ်ယူ. အထက်ပါအားလုံးသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာတွေ့ကြုံရနိုင်
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Sirkeci ဘူတာမှရရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွန်များအတွက် Save ကိုတစ်ဦးကရထားဘ်ဆိုဒ်ကိုသွား.
သင်တစ်ဦးစျေးပေါတဲ့ဥရောပခရီးစဉ်တစ်ခရီးစဉ်စီစဉ်နေပါတယ်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3ယင်းကိုရှာဖွေမိနစ် စျေးအသက်သာဆုံးမီးရထားခရီး. ယခုကြှနျုပျတို့၏ website မှ Login နှင့်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုရ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသော. ကျနော်တို့ငွေပေးချေမှု၌ရှိသမျှသောအဓိကပုံစံများကိုလက်ခံ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cheap-european-destinations/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / nl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား travelportugal travelspain ကြက်ဆင်
ငါဖန်တီးမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ညာဖက်ကလူမှသင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြကြောင်းအမှတ်တံဆိပ် messaging နှင့်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်များ. ငါပွုအဆိုပါလမ်းအရေးအသားအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးအသား, ပါဝငျနှင့်ပရိသတ်ကိုဗဟိုပြုအကြောင်းအရာ, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးငါထင်ဘာလဲ :) - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
10 နေ့ရက်များခရီးစဉ်များတွင် Bavaria ဂျာမဏီ
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား